कस्तो अचम्म: कुखुराको भाले ३० दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा ! - NepalTrending
कस्तो अचम्म: कुखुराको भाले ३० दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा !
NepalTrending — September 1, 2021 add comment
एजेन्सी । चोरी, डकैती जस्ता अपराधिक मुद्दामा प्रहरीले मानिसहरुलाई जेलमा थुनेको त सुनैकै कुरा हो तर, आज हामीले प्रहरीको हिरासतमा रहेको कुखुराको भालेको बारेमा चर्चा गर्न लागिरहेका छौ । प्रहरीले दुईटा भालेलाई ३० दिनदेखि नियन्त्रणमा लिएको छ । प्रहरीले उनीहरुमाथि सट्टेबाजीको आरोप लगाएको छ ।